Sweden oo noqotay wadanka 5-aad ugu barwaaqada badan aduunka | Somaliska
Wadanka Sweden ayaa kaalinta 5-aad ka galay wadamada ugu barwaaqada badan aduunka, taasoo ah hoos u dhac ku yimid kaalinta Sweden. Wadanka Norway ayaa kaalinta 1-aad galay, 2-aad waxaa galay Switzerland iyo Denmark ayaa kaalinta 3-aad gashay liiska oo sanadka ay samayso Prosperity Index.
Hoos u dhaca ku yimid barwaaqada Sweden ayaa lagu eedeeyay heerka dadka shaqo la’aanta ah iyo dhaqaalaha wadanka oo gaabiyay. Sweden ayaa dhinaca kale lagu amaanay dhinaca ganacsiga, iyadoo shirkadaha cusub ee Sweden laga aasaasayo ay cirka isku shareereen isla markaana ay hada Sweden noqotay wadanka ugu horeeya arimaha technoolojiyada iyo hal-abuurka ee wadamada waqooyiga Yurub.
Kaalinta ugu hooseysa ayaa waxaa liiska ka galay wadanka Central African Republic, Afghanistan iyo Haiti. Somalia ayaan lagu darin baaritaanka.
Si kastaba ha ahaatee, barwaaqada Sweden laga sheegay ayaa ah mid aysan la wadaagin soo galooti badan oo shaqo la’aan ah. Qaasatan Soomaalida ayaa ah kuwo inta badan shaqo la’aan ku haysato wadanka.
Sidee u aragtaa arintaan?
Qofka webkan leh waligii Sida Wax loo qoro ma Baranayo waar liiska akhristayaasha u soo Gudbi iyo siday u kala horeeyaan dalalku laba ama sadex dal haka soo qaadane waa maxay maqaalkan kala dhiman Ee afarta xaraf ah’ bulsho dhan oo qaarkood kaa Cilmi sareeyaan ayaa akhrisanaya maqaalada markaas caadi iska dhig’ LA taliyaal habka wax loo qoro ah raadso adiga way kaa taalaa waan u jeedaa.
Ok Aqoonyahanka! bal Halkaan Riix
Somaliyay sweden yayna soomaliyi eedeen wadanka qofkii waxyaqan oo xirfad leh wax waa kahelaaa lakin dadaan aqoon laheen oo da daal yar walee dhulkay gali waa hubaal
wan kaxumahay marka hore waayo sweden waxa soo gashaay intii nolashaa kadhaacday oo ku haray baadiiyaha somaliya dadkii aqoonta laha waxay barii hore galen USA iyo Engariska doowlada swedena waxay amiinsaantahay in somali oo dhami wada tahay reer badiiyee iyo aqoon la aan waxa sogashaay afaar somalia oo wada mooryana qofkii yimadaba meshuu ku fikiri laha horamarka nolashiisa ayuu ku fikaraya qofkale leen been beena ku keen iyo xaraan in uu ku nolado sorry hadii aan ka dheerayay fiikradayda waayo Jimcale waxa uu yiri ka dhiibta fiikrad wana ka dhiibtay
ifka dadka kaa daa aflagaadada hadii aad aqoon leedah ama aad u s a ama ingiriiska joogto in aadan ruuxaagu talo ku heyn ayaaa macquul ah marka walal wadan dhan ee umad badan ee somaliyeed ku nooshahay ceeb weeye in aad tiraaa waa mooryaaan jaahiliin qof aqoon yahan ahna sidaaa uma hadlo
marka take care for your self ayaan ku dhihi lahaa
baazi abdirahman mohamud says:
runtii aniga sweden waxa joogo famil keyga qaar wey shaqeyan qarne wax ayee bartaan aniga waxan jogaa kampala insha allah.mardhow ayaan usoo socdaa sweden dhibatada lga shekayo mawa maqlin waxan aminsana hy qofki inuu shaqeysto rabo oo xirfadleh inuu shaqo helaayo taas wa figradeyta
Horta jimcaale maxuu somalida u liidaa marka kasta waxii xun tusaale soomalidu ka dhigtaa iska laciifnimada anigga waan shaqeeyaa alhamdulilaah
Somali hadaan nahay dad dhibataysan ilaa 77 baynu nahy markaa dal burburay dadkiisu Tayo mayeelanayo, hayeshee
In la.isdhul dhigana ma fiicna dadaal keenu mabadna!!
Wadani Somaliyed says:
Asc dhamaan ummada somaliyed.
Waxaan la yaabay yarkan web ka wax kusoo qoro, maxaa yeelay wax walbo oo xun tusaale Somali ayuu soo qaataa, midda kale asaga somali miyaa mise? midda kale shaqo xumida oo somalida uu ku sheegeeyo sidaas uma jirto sida runtaa maxaa isaga dadka oo dhan uma xisaabsana oo somalida horumarka siyaasada wadankan iyo shirkadaha ey ku lee yihiin intabo masoo qoro, marka waxaan is weydiiyay Somali naceeb intee la eg ayuu ku jirta asaga? mise waxaa ka dhaadhacsan haddii uu asaga shaqeeyo ku faan camal? koley sida runta Jim’ale aniga iyo qooyskeyga waan shaqeynaa oo alxam adigana illaahey kuu barakeeyo. laakin iska dhaaf waxaan aad caado ka dhigatay oo ah soomalida aa saas eh iyo iwm bror, Wanaaga Somalida waa wanaagaada xumaanta somalida waa xumaantaada saas ula soco bror.
November 8, 2015 at 00:51
walaal ifraax in aad dad caayso ama aflageeydeeyso sharaf ku yeelameysid mana aha caalamadaha lagu yaqaano qof aqoon yahan ah waxaan aamisanahay in meelkasta oo soomaaliyi joogto laga helayo dad aqoon leh iyo kuwa aan lahaynba ugu danbeys fekerkaagu ilama ahan mid wax toosinaya mahadsanid
November 10, 2015 at 07:36
aflagadada dhaafa wallayaal
lakin waxan u bahanyahay dadaal iyo dhulqaad dacadnimo